Dagaal culus oo ka socda Magaalada Falluuja ee dalka Ciraaq iyo Shacab ku xayiran Magaaladaas |
Dagaal culus oo ka socda Magaalada Falluuja ee dalka Ciraaq iyo Shacab ku xayiran Magaaladaas
Ciraaq (NN) 31/05/2016
Ciidamada Xukuumadda Ciraaq iyo Xoogag Shiico ah oo ay hawadan ka taageerayaan Diyaaradaha Dagaalka dalka Marykanka, ayaa billaabay Weerar xoog leh oo ay doonayaan inay ku Qabsadaan Magaalada Falluja ee dalka Ciraaq.
Saldhig booliis oo ku yaalla gudaha Faluuja ayay ciidamadan is-bahaysanaya la wareegeen, kaddib markii ay dhinaca Koonfureed ka galeen Magaaladaas oo ay ka Talinaysay Kooxda Islaamiga ah ee Daacish.
Ali Al-Hamdaani oo ka mid ah sarkaal ka tirsan ciidamada dalka Ciraaq ayaa sheegay inay ciidamadoodu jireen furamaha kooxda Daacish; ayna ku sugan yihiin Gudaha Falluuja.
Falluuja, waa magaalada keliya ee u dhaw caasimadda Ciraaq ee Baqdaad oo ay ku hayso gacanta kooxda Daacish, waxaana la rumeysan yahay inay tahay meesha ay kooxdu kasoo Abaabusho Weerarada iyo Qaraxyada is-miidaaminta ah ee lala eegto Dadka Shiicada ah iyo Xarumaha Dowladda ee ku yaalla Magaalada Bqadaad.
Bayaan ciidamada Ciraaq ay soo saareen ayaa lagu sheegay in Guutooyin cidamadooda ka tirsan ay shalay kusii siqeen dhinaca koonfureed ee Falluuja, iyagoo dhinaca cirkana ay ka taageerayaan diyaaradaha dagaalka Maraykanka.
Sidoo kale, Xukuumadda Washington ayaa sheegtay in ay ku qiyaasayso xoogagga ISIS ka tirsan ee ku sugan magaaladaas inta u dhexeysa 500 illaa 700 oo ruux, lagana adkaan karo haddii awoodda la saaro.
Dhinaca kale, Shacabkii Magaaladaas ayaa ka baxay, waxaana la sheegayaa inay ka jirto magaaladaas macluul iyo baahi aad u badan. Ku dhawaan 50,000 oo ruux ayaa ku xanniban gudaha magaalada Falluuja, kuwaasoo aan haysan biyo, koronto iyo shidaal sida ay sheegtay Hay’adda NRC ee laga leeyahay Dalka Norway.
Ugu dambeyn, Hay’addaha Samafalka ayaa ka walaacsan dadka dhibaatadu soo gaarayso, waxayna Qaramada Midoobay ku boorisay ku dagaallamaya inay wado u furaan dadka magaalada ee doonayay inay ka baxaan.